Budata Polyforge APK maka Android
Free Budata maka Android (55.00 MB)
Polyforge bụ egwuregwu ịse ụdị nke na-adọta anya site na obere anya ya. Nime egwuregwu ebe anyị na-agbalị ịmepụta ahịrị nke ụdị geometric nke a na-eme ka ọ na-atụgharị na-aga nihu, anyị enweghị oge na njedebe mmegharị, ma ebe ọ bụ na anyị ga-emepụta ọdịdị ahụ nke ọma, ọbụna ọdịdị dị mfe nwere ike bụrụ ihe ịma aka nakụkụ ụfọdụ.
Polyforge, nke bụ otu nime egwuregwu nka nke m chere na e mere ka a kpọọ ya na ekwentị Android, bụ mmepụta nke chọrọ nlebara anya zuru oke na ọ bụghị nke ọma maka ndị egwuregwu na-enweghị ndidi. Ebumnuche anyị negwuregwu ahụ bụ ịdọrọ akụkụ nke ọdịdị ya na kristal na-atụgharị nakụkụ nke ọzọ nke ọdịdị ntụgharị. Iji see ahịrị ndị mejupụtara ọdịdị ahụ, ihe anyị na-eme bụ imetụ aka noge kwesịrị ekwesị iji tụba kristal. Mgbe anyị mechara akụkụ niile nke ọnụ ọgụgụ ahụ, anyị na-aga nihu na ngalaba na-esote, na ka anyị na-aga nihu, ihe osise zuru ezu na-apụta.
Mmepụta: ImpactBlue Studios